Musharrixiinta Doorashada Madaxtinimada Uganda Oo Ka Dooday Ciidamada Dalkooda Kaga Sugan Somalia | Berberanews.com
Musharrixiinta Doorashada Madaxtinimada Uganda Oo Ka Dooday Ciidamada Dalkooda Kaga Sugan Somalia
February 14, 2016 | Published by: Hargeysa
Kampala (Berbera news) Xilli lagu Wado inay Toddobaadkan ka dhaco Dalka Uganda Doorashada Madaxweyenimada oo ay ku Tartamayaan Siddeed Murashax oo midi ay tahay Haween tahay, ayaa waxa xalay dhex-martay dood kulul oo ay inteeda badan uga hadleen Ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya.
Murashaxiintan oo dooddoodu ka baxaysay Telefisihinka ayaa ahayd middii ugu horreysay oo uu ka qaybgalo madaxweynaha hadda xilka haya,Yoweri Museveni, waxaana dooddan ay murashaxiintu yeesheen diiradda lagu saaray siyaasadda gudaha iyo tan dibadda dalka Uganda.
Hoggaamiyaha Axsaabta Mucaaradka ugu weyn, Jen. Kizza Besigye oo ah nin ay aad isku hayaan Madaxweyne Museveni ayaa ka hadlay ciidamada Uganda ee ku sugan Somalia, isagoo sheegay inuu soo dhaweynayo inay howlo nabad-ilaalin ah loogu diro Soomaaliya.
Sidoo kale, waxa uu sheegay in Xaaladaha Nabad-galyo Xumada ah ee Somalia ka jira ay yihiin kuwo ka dhashay hoggaan-xumada madaxda dowladda Somalia iyo siyaasiyiinta kale.
‘‘Aniga Waxay ila tahay in nabad-galyo darrada Somalia ka jira ay tahay mid ka dhalatay siyaasad-xumada jirta, marka haddii aad isku daydo inaad taageero iyadoo siyaasaddu ay tahay mid aan wanaagsanayn, waxay noqon kartaa mas’uuliyad-darro aad sameysay.” ayuu yidhi Kizza Besigye.
Dhinaca kale Murrashaxa kale ee ugu awoodda badan mucaaridka Benan Braro oo isagana awood badan leh ayaa kula taliyay Soomaalida in aanay ka sugin in wadankooda ay u dhisto Uganda, balse ay ogaadaan in iyaga looga baahan yahay inay dalkooda dhistaan.
“Kaalinta Cidanka AMISOM ee Somalia ku sugan waa inay abuuraan Jawi ay Somaalidu Dalkooda ku dhisan karaan; balse ma garanayo waqti cayiman oo aan Ciidamadeenna kala soo bixi karno Somalia,” ayuu yidhi Mr. Braro.